Soomaalida ka shaqeysa Minnesota oo shirkadda Amazon ku qasbay wadahadal - Halbeeg News
Soomaalida ka shaqeysa Minnesota oo shirkadda Amazon ku qasbay wadahadal
MINNESOTA(HALBEEG)-Ururka shaqaalaha iyo baareyaal ayaa sheegay in aysan weli maqal Amazon oo miiska wadahadalka joogta kadib ay caddaadis ay saareen qaar ka mid ah shaqaalaheeda.
Hibaaq Maxamed oo timid Mareykanka kadib muddo ay qaxooti ku ahayd dalka Kenya tan 2016-kii ayaa ka shaqa bilowday mid kamid ah bakhaarada Amizon iyada oo kartoonno ku cabbeeyn jirtay alaabooyinka shirkadda ay u direyso macaamiisheeda.
Muddo kadib, Hibaaq ayaa xaqiijisay in iyada iyo shaqaalaha kaleba shirkadda ay ka dalbatay in ay kordhiyaan wax soo saarkooda shaqo, shaqaalaha ayaa saacaddii cabbeyn jiray 160 kartoon iyadoo haatanna lagu khasbay in ay xir xiraan 230 kartoon saacadiiba.
Hibaaq oo ah gabadh Muslimad ah ayaa sheegtay in shirkadda Amazon ay u ogoleyd xilli cayiman oo ay salaadda ku soo tukato taas oo uu sharciga u ogolaaday balse maamulka ayaa Hibaaq ka dalbaday in ay boobsiis kusoo tukato.
“Cadaadis badan ayaa jira, dadkuna waxa ay ka baqayaan in mar uun shaqada la eryi doono” ayey tiri Hibaaq oo 24 jir ah.
Hibaaq iyo dad badan oo la mid ah oo ku dhashay Soomaaliya ayaa si aan caadi ahayn uga fal celiyay sida shirkadda Amazon ula dhaqantay shaqaalaheeda, waxa ay soo abaabuleen cabasho.
Hadda waxaa aad isugu xiran ururada isku dhaqamada dhow waxaan sii awood siinaya ururka shaqaalaha ee suuqa, waxaa ay u muuqdaan in ay noqonayaa ururkii ugu horeeyay ee Amazon wadahadallo la yeesha.
Kadib dibadbaxyo ay shaqaalaha sameeyeen xagaagii lasoo dhaafay, shaqaalaha waxa ay laba jeer kulamo qarsoodi ah la yeesheen maamulka shirkadda bilihii lasoo dhaafay.
Qabanqaabiyeyaasha ururada shaqaalaha ayaa sheegay in aysan ka warqabin cabashada shaqaalaha sidoo kalena aanay filaneyn in ay Amazon wadahal la furi doonto xittaa kulamo qarsoodi ah.
Todobaadkii lasoo dhaafay, shirkadda Amazon ayaa soo bandhigtay isbadello ay ka sameysay xarumaha ay ku leedahay Minnesota.
Shirkadda ayaa sheegtay in ay u baahan doonto maareeye guud iyo agaasime ku hadla luqadda Soomaaliga oo shaqaalaha kala heshiiya wax soo saarka, shaqa ka ceyrinta kana jawaaba cabashooyinka shaqaalaha muddo shan cisho gudahood isaga oo afartii bilba mar la kulmi doona shaqaalaha.
Baarlamaanka Galmudug oo ansixiyay wasiirrada cusub ee la magacaabay
Ciidamo ka tirsan Jabhadda ONLF oo gaaray Jigjiga